Iyo Yakanakisa Vhura Sosi CRMs | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yakanakisa yakavhurwa sosi CRMs
Acronym CRM (Kwevatengi Hukama Management) Iyo software inoshandiswa kune manejimendi yehukama nevatengi iyo inowanzo shandiswa mumakambani. Kazhinji, software kana masutu ebhizinesi anopiwa anosanganisira kuwanda kwemabasa akadai seE ERP, PLM, SCM uye SRM inosanganisirwa, mukuwedzera mukushandisa CRM pachayo.
Kune avo imi musati matoziva, CRM inogonesa nzira yekugadzirisa iyo kudyidzana kwekambani nevatengi vayo zvazvino uye zvinogona, maneja vashandisi uye zvakare kubvumira kukudziridza marongero ekusvikira vangangove vatengi mune ramangwana. Kugadzirisa data revatengi uye analytics kunogona kusimudzira hukama hwebhizinesi nevatengi, kuvadzivirira kubva pakukwira kuenda kumakwikwi, uye kuramba uchikura.
Zvakanaka, kana iwe uri kufunga nezve kusanganisira CRM system mune yako diki, yepakati kana hombe kambani, pano tinokuratidza iwo mapurojekiti e open source kuti iwe uchawana chinonakidza.
Epesi: iyo yemahara uye yakavhurwa sosi projekiti yakanyorwa muPHP / Ajax, ichiita yakakwana CRM app yekushandisa paWindows, Linux, macOS uye iOS. Uye zvakare, inowanikwa mumitauro makumi matatu. Togo
EspoCRM: imwe chirongwa chakagoverwa pasi peGPLv3, iine yayo kuitisa, yemahara kana kubhadhara mutengo mudiki kuti uwane zvirinani zvirinani. Ir
SuiteCRM: Icho chirongwa chakakura zvakanyanya, uye chakasimuka apo SugarCRM yakasiiwa. Ir
OdooCRM: ine nharaunda inoshanda mukusimudzira uye inoda kubatsira, pamusoro pekuve nezvimwe zvinhu zvinosanganisirwa senge zvishandiso zveagenda, mishumo, nezvimwe. Ir
Zurmo: yakakwana kwazvo uye nyanzvi CRM chikuva iyo inogona kuve yakanaka imwe sarudzo kune apfuura. Iyo ine kunyange ine gamification maficha, kana iwe uchifarira ... Ir
vTiger CRM: imwe yakanaka imwe nzira inomuka seforogo yeSugarCRM, uye iyo ichiri pasi peirisensi yemahara, kunyangwe kana mutengesi aine mapakeji akazara kana masuti anosanganisira CRM uye mamwe mabasa akabhadharwa kana iwe uchida iwo. Ir
Mafuta Mahara CRM: Iyo mhinduro yakapusa asi ine simba kwazvo, nekuti yakanyorwa zvichibva paRuby chirongwa chemutauro uye iyo RoR (Ruby On Rails) fomati. Ir
Kune mamwe mapurojekiti, asi ini ndinofunga izvi ndizvo zvinonyanya kufadza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iyo yakanakisa yakavhurwa sosi CRMs
Tora paki yemakosi ekutora mifananidzo pamutengo we1
Canonical inokumbira ruregerero kuUbuntu 18.10 uye Ubuntu 18.04 kukanganisa kwekutanga uye kuburitsa inogadziridza